Inter Milan oo shaacisay go’aankeeda kaga aaddan inay sii heysato Alexis Sánchez – Gool FM
(Milano) 23 Luulyo 2020. Kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ayaa shaacisay go’aankeeda kaga aadan inay sii heysato Alexis Sánchez, kaasoo amaah ahaan ay kaga soo qaadatay naadiga Manchester United.
Nerazzurri ayaa si rasmi ah u shaacisay inay wadahadalo la gali doonto kooxda Manchester United si ay u kordhiso heshiiska amaahda ah ee Alexis Sánchez, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in tababare Ole Gunnar Solskjær uu doonayo in gabi ahaanba uu ka takhaluso laacibka reer Chile.
Alexis Sánchez ayaa Inter Milan kala qeyb qaatay 26 kulan xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan, wuxuuna si la yaqaano isugu muujiyay qeybta labaad ee xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigtay in kooxda reer Talyaani ay ku adkeysato inuu la sii joogo.
Madaxa fulinta kooxda Inter Milan ee Giuseppe Marotta ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sport” ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay:
“Waxaan wadahadalo la furnay kooxda Manchester United si aan isugu dayno inaan qandaraaska ugu dheereyno ciyaaryahanka”.
Si kasaba ha noqotee, Alexis Sánchez ayaa kulamadii la soo dhaafay bandhig fiican ka sameeyay kooxda Inter Milan, wuxuuna ka qeyb qaatay 8 gool, 2 gool ayuu dhaliyay, halka sidoo kale uu caawiyay 6 gool kale, 7-dii kulan ee ugu dambeysay uu kaga soo muuqday Nerazzurri horyaalka Talyaaniga.